दाहालतिर हेरेर ओलीले भने- हामीले मेलामा मित लाएको हो र! :: Setopati
दाहालतिर हेरेर ओलीले भने- हामीले मेलामा मित लाएको हो र!
भानुभक्त काठमाडौं, वैशाख ९
आइतबार दिउँसो साढे १ बज्दा राजधानीको राष्ट्रिय सभागृह वरपर भिडभाड थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना र लेनिनको जन्म दिन मनाउन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ता भेला भएका थिए। दुवै दलका अध्यक्ष पनि एकताको सकारात्मक सन्देश दिन सभागृह पुगिसकेका थिए। प्रदर्शनीमार्गका दुवैतिर भने नेपाली कांग्रेसका चारतारे झन्डा फहराइरहेका थिए।
राष्ट्रिय सभागृहको हलभित्र जाने मुख्य प्रवेशद्वारमा प्रहरी साङ्लो बनाएर उभिएको थियो। भित्र जान खोज्नेलाई प्रहरी भन्थे- भित्र केही छैन, यहाँबाट जान मिल्दैन।
ढोका बाहिरको भर्‍याङमा उभिएकाहरू कुरा गरिरहेका थिए- हुन पनि अत्ति गरेका हुन् के। लेनिनको जन्मदिनमा उनकै फोटो नराखी कार्यक्रम हुन्छ?
प्रहरीले भनेजस्तै हलभित्र केही भएको थिएन, तर धेरैथोक भएको पनि थियो।
मञ्चमा केही कुर्सी र टेबल थिए। पछाडि एउटा भर्याङ लडेको थियो। दर्शकदिर्घाको पहिलो लहरमा एमाले सचिव योगेश भट्टराई, माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसाल र दोस्रो लहरमा पूर्व सभामूख ओनसरी घर्ती मगर, पूर्वमन्त्री अग्नि सापकोटा लगायत नेताहरू उत्सुकतासाथ बसेका थिए।
भित्तामा कार्यक्रमको बोर्ड थियो, उल्टो फर्काइएको। केही बेरअघि त्यही बोर्डका विषयमा नाराबाजी र हो-हल्ला भएकाले कार्यक्रम स्थगित भएको रहेछ।
बोर्डमा दायाँतिर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर थियो भने उनको शिरमाथि पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीका तस्बिर थिए।
बायाँपट्टि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तस्बिर थियो।
'कार्यक्रम किन स्थगित भएको?' भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा माओवादी नेता सापकोटाले भने,'गुरूहरूको फोटो नराखेकाले यो बोर्डमा साथीहरूले विरोध जनाउनुभयो, नयाँ बोर्ड बनाउन पठाएको छ, त्यो ल्याएपछि कार्यक्रम सुरू भइहाल्छ।'
प्रधानमन्त्री ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत संयोजन समितिका अन्य सदस्य आधा घन्टाअघि आएर भित्र बसिरहेका थिए।
नयाँ बोर्ड प्रिन्ट गरेर ल्याएपछि कार्यक्रम सुरू हुने!
'अब के गर्ने त?' सापकोटाले भने, 'एकछिन ढिला हुने भयो।'
साढे २ बजेसम्म बोर्ड आएन।
बरू लोकगायक बद्री पंगेनी स्टेजमा उक्लिए। पोडियममा गएर भने, 'हामी कलाकार यस्तै बेला हो चाहिने।'
उनले बिनाट्रयाकमा गीत गाए, 'केमा कुरा मिलेन प्रचण्ड-ओलीमा, जनताहरू पछि लाग्या छन् है तिम्रै बोलीमा।'
उनले 'सही पनि एमाले मै पनि एमाले' गीत पनि गाउन खोजेका थिए। दर्शकले हुटिङ गरे। उनी अरू नै गीत गाएर त्यहाँबाट निस्के।
सवा तीन बजेपछि वाइसिएल अध्यक्ष दीपशिखा लगायत १०/१२ जनाले उल्टो फर्काएको बोर्ड सुल्टो पारे।
एमाले कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पोडियम अगाडिको कुर्सीमा मार्क्स र लेनिन दुई तस्बिर ल्याएर अड्याए। राम्ररी नअडिएपछि पछाडि काठ राखे। त्यसले पनि नभएपछि अगाडितिर किला गाडे।
त्यतिञ्जेल अखिल क्रान्तिकारीका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले नयाँ प्रिन्ट गरेको बोर्ड ल्याए। त्यसलाई पहिलाको बोर्डको दायाँतिर राख्न सबै जना लागे।
करिब १० मिनेट लगाएर डोरीले बाँधेको बोर्ड एकछिनमै खस्यो। हलभरि हाँसो गुन्जियो।
अर्कोपटक वाइसिएल अध्यक्ष दीपशिखा आफैं भर्‍याङ चढे र बोर्ड बाँधे। एक जना प्रहरी अधिकारीले सञ्चारकर्मीतर्फ फर्केर भने, 'धेरै हल्ला नगर्नुस् है फेरि बोर्ड खस्छ!'
दोस्रोपटक बोर्ड झुन्ड्याउँदा चार बज्न लागेको थियो। ओली, दाहालसहित संयोजन समितिका सबै नेता एक साथ मञ्चमा आइपुगे।
कार्यक्रमको सुरूमै कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, 'अहिले दिउँसोको ठीक १ बजेको छ। अब हाम्रो कार्यक्रम सुरू हुन्छ। फेरि हलमा हाँसो गुन्जियो।
कार्यक्रम सञ्चालक विष्णु पौडेलले पहिला मञ्चमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बोलाए।
'यो प्राविधिक कुराले हामीलाई खसखस भएको छ, हामीले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेनौं, पछि यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ,' दाहालले भने।
केही समय बोर्डका विषयमा बोलेपछि उनले पार्टी एकता हुन नदिन विभिन्न स्वार्थ समूहले चलखेल गरिरहेको बताए। आधा घन्टा लामो भाषण गरेका दाहालले पार्टी एकता समानता, सम्मान र औचित्यपूर्ण गरी तीन आधारमा हुने उल्लेख गरे।
'कसैलाई अपमान गरेर पार्टी एकता हुँदैन, कमरेड केपी ओली र मबीच पछिल्ला समय भएका छलफलबाट हामीले यी तीनलाई एकता मापदण्ड बनाएका छौं,' दाहालले भने, 'अहिले पनि मैले नेता/कार्यकर्ताबाट केही गुनासा सुन्ने गरेको छु। एकथरी एक कानमा एउटा कुरा भर्ने अर्काथरीले अर्को कानमा अर्को कुरा भर्ने गर्नुभो भने असर पर्दैन भन्न सक्दिनँ। म पनि मान्छे हुँ।'
उनले एकताबाट अब ओली र आफूले चाहेर पनि दायाँबायाँ गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आश्चार्यजनक रूपमा पार्टी एकता हुने बताए।
'ओलीजी र मैले कुरा गर्दा हुन्छ भनेको दिन हुन्न, भन्दै नभनेको दिन हुन्छ, हल्ला नै नगरेको दिन ड्याम्म पार्टी एकता हुन्छ,' उनले भने।
दाहालपछि पोडियमका आएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रममा भएको ढिलाइ र बोर्डबारे केही बोलेनन्। उनले विश्व र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चर्चा गर्नमा धेरै समय खर्चिए।
उनले पार्टी एकता प्रक्रियामा दाहाल भावुक भएको पनि बताए।
'प्रचण्डजी भावुक हुनुभयो, अब हामीले गर्दैनौं भने पनि पार्टी एकता हुन्छ भन्नुभयो। त्यस्तो होइन। हामीले नगरी पार्टी एकता हुँदैन। सुपरमार्केटमा गएर एकता देखेर हामीले ल्याएका होइनौं। यो हामीले सुरू गरेका हौं। पार्टी एकता पनि हामी गर्छौं,' उनले भने।
उनले पार्टी एकता मेलामा लाएको मितजस्तो नभएको बताए।
'हामीले मेला मित लाएको हो र! अब त हामी यस्तो अवस्थामा आइसक्यौं, खुट्टामा मिलेन भनेर जुत्ता नलाउने होइन, बरू खुट्टा नै ताछतुछ गरी सानो पारेर जुत्ता लाउने हो,' प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालतिर हेरेर भने।
उनले एकताअघि अलिअलि भावुक हुनु पनि स्वाभाविक भएको भन्दै अर्को उदाहरणसमेत दिए।
'बिहेअघि दुलहालाई दुलहीको घर अर्कै लाग्छ, दुलहीलाई दुलहाको घर अर्कै लाग्छ, बिहेपछि जब एकता हुन्छ त्यो घरको बाच्छोको पनि माया लाग्छ,' ओलीले बोर्डको विषय निकाल्दै भने, 'धेरैपछि त्यस्तो पनि भएको थियो है भन्दै मुसुमुसु हाँसो उठ्छ। यो बोर्डको कुरा पनि त्यस्तै हो।'
ओलीले माओवादी र एमाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त र सुशासनमा सहमत भएको र निकट भविष्यमै पार्टी एकता हुने निष्कर्षसहित झन्डै एक घन्टा लामो भाषणको बिट मारे।
दाहालले भने कार्यक्रम सकिएपछि पनि एकपटक फर्केर फेरि बोर्डतिर हेरे।
प्रकाशित मिति: आईतबार, वैशाख ९, २०७५, १०:२७:१०